Faah faahin Khudbadii Madaxweynuhu ka jediyay Furitaanka Kalfadhiga Manta. – SBC
Faah faahin Khudbadii Madaxweynuhu ka jediyay Furitaanka Kalfadhiga Manta.
Posted by Webmaster on Maarso 2, 2013 Comments
Khilaaf kama jiro Dowladnimo, Midnimo, Sarreynta Sharciga, arimaha Federaalka, Dhisid Ciidan Qaran, Qaadidda Cunaqabateynta Hubka, iyo Deris Wanaag.
(Muqdisho, Soomalia,Maarso,02 2013)Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maaanta furitaankii kala fadhiga 2aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaalia ka jeediyay Khudabadda Xaaladda Qaranka.
Goobtaas ayaa waxaa joogay Gudoomiyaha Barlamaanka, Mudane Maxemed Sheekh Cusmaan (Jawaaari) Raiisal Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, Xildhibaanada Qaranka, Golaha Wasiirada iyo Sarakiil sar-sare oo ka socotay dowladda qeybaheeda kala duwan.
Madaxweynaha oo qudbad Qiira badan leh ka jeediyay Munaasabaddan ayaa ugu horeyntii si sharaf leh u salaamay Baarlamaanka. Kadibna wuxuu tacsi u diray dhamaan Xildhibaanadii, Ciidamadii iyo Shacabkii geeriyooday.
Madaxweynaha ayaa goobtaas ka sheegay in aan la isku khilaafsaneyn Dowladnimo, Midnimo, Sarreynta Sharciga, arimaha Federaalka, Dhisid Ciidan Qaran, Qaadidda Cunaqabateynta Hubka, Deris Wanaag, Xiriir wanaagsan oo lala yeesho dalaka deriska ah, dib-u heshiisiinta iyo Hanti-isucelinta. Nidaam dowladdeed oo Federaali ah ayey dadka Soomaaliyeed ku heshiyeen, Dastuurka ayayna ku cadahay.”
Madaxeweynaha ayaa goobtaas ka cadeeyay siyaasadda arimaha gudaha iyo tan dibadda.” Laga soo bilaabo markii la unkay dowladdaan bishii Agoosto ee 2012, waxaa dalka ka dhacay isbedello qiimo leh oo ay ka mid yihiin: Amninga iyo Nabadeynta. Dhul ballaaran oo ay horay u haysatay kooxda Al-Shabaab ayey dowladdu xoreysay. Deegaano fara badan ayey dowladda xaqiijisay in dhibaato dambe ka dhicin. Magaalo Madaxda ayaa lagu guuleysatay in amnigeeda la xaqiijiyo oo isbaaroyinkii laga qaaday”
Mar uu Madaxweynuhu ka hadlayey Ciidamada wuxuu sheegay “Ciidamadda Qalabka sida ayaa labo shaqo isku hayo, kuwaas oo kala ah howlgalada nabadgelyo oo ay dalka ka wadaan iyo mid dib u dhis ayaga lagu sameynayo .”
Madaxeynaha ayaa sidoo kale sheegay”Siyaasadda Dowladda waxaa ka mid ah soo celinta haybadii iyo xiriirkii iskaashiga Soomaaliya iyo dibedda waxaana la booqday dalal badan, waxaana isfaham istaageersi ah la soo yeelanay dalalkaas iyo Dalalka Deriska ah. Wuxuu wada hadalkeena saldhig u ahaa sidii loo aabuuri lahaa jawi nabadeed iyo is-faham si wax wada qabsi wanaagsan looga dhex abuuro dhamaan shacabka Geeska Afrika. Waxaana dalalkaas uga mahad celinay kaalmada walaalnimo ee ay u fidiyeen walaalahooda Soomaaliyeed”
Madaxweyne Xassan ayaa sidoo kale sheegay in si gaar ah ay ula kulmeen Dowladda Maraykanka iyo tan Ingriiska waxeyna balan qaadeen in ay Soomaaliya garab taagan yihiin ayna ka saacidi doonan dhinac kasta.
Madaxweynaha ayaa sheegay in bisha May uu dhici doono shirweyne loo qaban doono Soomaaliya loogana hadli doono arimaha Soomaaliya. Dhanka kale Soomaali-Land wada hadalkii lala bilaabay wuu sii socon doonaa.
Ugu danbeytii ayuu Madaxweynaha Xildhibaanada u sheegay in ay howl badan dhiman tahay loona baahan yahay in si wadajir ah loo qabto. Horumarkaasna uu faaiido weyn ugu jiro umadda Soomaaliyeed.
— Communication Office
Office of the Somali President Mogadishu, Somalia